News Collection: मनीषा गौरी,राजेश धर्मा
मनीषा गौरी,राजेश धर्मा
काठमाडौ, मंसिर २२ - 'मलाई सबैभन्दा खुसी केमा छ भने,' लाजिम्पाटस्थित होटल सांगि्रलाको गार्डेनमा अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले मंगलबार भनिन्, 'धेरैपछि नेपाली फिल्म खेल्न पाएँ । आफ्नो भाषा बोलेर अभिनय गर्न पाएँ ।' २१ वर्षपछि पहिलोपटक मनीषाले अभिनय गरेको नेपाली फिल्म 'धर्मा'को पत्रकार सम्मेलन भइरहेको थियो, उनले आफूलाई यस फिल्मबाट निकै सन्तुष्टि मिलेको दाबी गरिन् ।
'यो फिल्ममा खेलेपछि मलाई नेपाली फिल्मका धेरै सकारात्मक पाटोहरूको ज्ञान पनि भएको छ,' उभिएर लगभग दुई मिनेट मात्रै बोलेकी मनीषाले भनिन्, 'टेक्निकल पार्ट, अभिनयलगायत अन्य पक्षहरू पनि नेपाली फिल्ममा राम्रो हुँदै गइरहेको पाएँ ।' मनीषाको यो भनाइ दाँज्न 'धर्मा' हेर्नैपर्ने हुन्छ, जुन आउँदो शुक्रबारबाट काठमाडौं उपत्यका, मध्य र पश्चिम नेपालका विभिन्न हलहरूमा एकसाथ लाग्दै छ ।
सन् १९८९ मा प्रकाश अधिकारीको 'फेरि भेटौंला' मा खेलेपछि बलिउड पसेकी मनीषाको दोस्रो नेपाली डेब्यु मानिएको 'धर्मा'मा मनीषा नै केन्द्रीय पात्रको रूपमा रहेकी छन् । 'फिल्म चल्नुअघि सबैले राम्रो दाबी त गरी नै हाल्छन्,' आधी अंग्रेजी र आधी नेपाली मिसाएर बोलिरहेकी मनीषा फिल्मबारे बोलिन्, 'तर मेरो अनुभवमा यो फिल्मले तपाई -दर्शक)हरूको मन पक्कै पनि छुनेछ ।' मनीषाभन्दा ठीक अघि बोल्न पत्रकारसामु उभिएका निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालले पनि यही भने । उनले फिल्मले नेपाली समाजको एउटा कुरूप पाटो उजागर गर्न खोजेको बताउँदै फिल्ममा मनीषासँगै राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, रेजिना उप्रेती, संयोग पोखरेल, शंकर आचार्यलगायतले निकै राम्रो काम गरेको दाबी गरे ।
पत्रकार सम्मेलनपछिको कुराकानीमा मनीषाले लामो समयपछि नेपाली फिल्ममा फर्किनुको पछाडि निर्माता डा. दुर्गा पोखरेलको हात रहेको बताइन् । सम्बन्धविच्छेदबारे केहीअघि भारतीय पत्रिकाले चलाएको हल्ला 'वाहियात र त्यसबारे केही नबोल्ने' बताउँदै उनले फिल्म दुर्गाको आग्रहकै कारण मात्र नेपाली फिल्ममा खेलेकी खुलाइन् । निर्मात्री दुर्गाले चाहिँ नेपाली समाजको एउटा तीतो सत्यलाई बाहिर ल्याउन आफूले फिल्म बनाएको बताइन् । 'भ्रष्टाचारको आडमा टिकेको विसंगतिपूर्ण समाजको कथा छ,' उनले फिल्मबारे भनिन्, 'सत्य र असत्यबीचको लडाइँ हो, जहाँ सत्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।' भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने 'धर्मा' (राजेश हमाल) पात्रको नामबाट फिल्मको नाम जुराइएको हो र यसमा मनीषा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा साथ दिने गौरी पात्रको रूपमा हुनेछिन् । रिलिज भएको दोस्रो सातापछि पूर्वाञ्चलका विभिन्न हलहरूमा पनि फिल्म लाग्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । प्रकाशित मिति: २०६७ मंसिर २२ ०८:४०